कस–कसले चढिरहेका छन् संसदका गाडी ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कस–कसले चढिरहेका छन् संसदका गाडी ?
Published On : २२ चैत्र २०७४, बिहीबार ०३:१४
काठमाण्डु, २२ चैत– संघीय संसदमा पदाधिकारीले गाडीसहितको सेवासुविधा पाउँछन् ।
सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी र सत्तापक्षको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिको सभापतिले गाडीलगायतका सुविधा पाउँछन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतक बुधबार चयन गरेको छ । एमाले दलको कार्यालयबाट प्रमुख सचेतक र सचेतकमा नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै गाडी सुविधा दिइने संघीय संसद सचिवालयस्थित सवारी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव नेत्रबहादुर कार्कीले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट